Halatra sy vaky trano Saron’ny polisy ilay “tompon’ny lakile”
Fanalahidy maro mahavaha hidin-trano eto an-drenivohitra no tra-tehaky ny polisy teny amin’ny Tetezan’i Bekiraro.
Lehilahy iray 39 taona no voasambotra ny 19 septambra 2019 lasa teo resaka halatra miaro vaky trano. Ny 16 septambra 2019 dia vaky ny trano fivarotana iray teny an-toerana. Very tamin’izany ny entam-barotra maromaro. Nametraka fitoriana avy hatrany ny niharam-boina. Ny 19 septambra 2019 tokony ho tamin’ny 10 ora maraina anefa dia tsy am-pihambahambana akory ity lehilahy 1 namaha ilay tsena izay toy ireny tompon-trano ireny. Tsikaritry ny manodidina izany. Nantsoina ny polisy ka noraisim-potsiny izy. Nandritra ny fisamborana dia mbola nahitana fanalahidy maromaro teny aminy izay fampiasany amin’ny famakiana trano. Nentina avy hatrany eny amin’ny paositry ny polisy nanaovana fanadihadiana.